iOS 5 ye-iPhone | IPhone iindaba
iOS 5 ibe yinkqubo yokusebenza kwe-Apple apho I-SIRI iboniswe okokuqala, umncedisi wezwi okwaziyo ukwenza iintshukumo ezininzi ngemiyalelo ethethiweyo. IOS 5 nayo izise uphuculo oluninzi njengokukwazi ukwenza izilumkiso zesiko, usetyenziso lweZikhumbuzi, ukukwazi ukuthumela imiyalezo yasimahla ngeMessage, Ukuphuculwa kwesicelo sekhamera (i-HDR, igridi kunye nevolumu yokunyusa iqhosha lokuthatha ifoto), ukudityaniswa kwenethiwekhi yoluntu iTwitter okanye ukudityaniswa iziko lokwazisa.
Bayakwazi ukufaka iinguqulelo ezintathu ezahlukeneyo ze-iOS kwi-iPad 2
por Iindaba ze-IPad yenzayo 8 iminyaka .
Abasebenzisi beMac banethamsanqa lokukwazi ukwenza izahlulelo ezahlukeneyo kwiikhompyuter zethu ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenza ze ...
I-Apple ivumela ukukhutshelwa kweenguqulelo ezindala zezicelo
Xa inkqubo entsha yokusebenza iphehlelelwa, zonke iindaba zigxile kumanqaku amatsha abandakanya oko, kwaye kuhlala kwenzeka ...
Faka ingxelo entsha yeCydia 1.1.8 kwi-iOS 5
por UGonzalo R. yenzayo 9 iminyaka .
Ngokukhutshwa kwe-jailbreak ye-iOS 6 uSaurik ukhuphe ingxelo entsha yeCydia, uguqulelo 1.1.8….
Izixhobo ezinokubuyisela kwi-iOS 5.x ngeRedsn0w 0.9.15b1 entsha
Inguqulelo entsha yeRedsn0w esanda kukhutshwa liQela leQabane iquka iindlela zokubuyisela ku-iOS 5.x i…
Olu lutshintsho uninzi lwethu ebelulindele ukuba luqhubeke lubambe kwi-iOS 5.1.1 ngokungafakwanga kwintolongo, ewe ...
Umphathi wokukhuphela iSafari 2.0 ngoku iyafumaneka (Cydia)
UDustin Howett usungule uhlobo olutsha lweSafari yokukhuphela iMenenja ye-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod Touch, yona…
I-Redsn0w 0.9.11b1 ivumela ukwehla ukuya kwi-5.0.1 ukuya kwi-iPhone 4S
por UGonzalo R. yenzayo 10 iminyaka .
I-Redsn0w ihlaziyiwe yenguqulo 0.9.11b kwaye ngoku ivumela ukwehla kwi-iPhone 4S, i-iPad 2 kunye neNtsha ...
IOS 5.1.1 ngoku iyafumaneka (amakhonkco kunye nokukhuphela ngokuthe ngqo)
por Eyona ilungileyo ye-iOS yenzayo 10 iminyaka .
U-Apple usandula ukukhupha i-iOS 5.1.1, uhlaziyo olunokukhutshelwa ngoku kwi-iTunes okanye ngapha komoya (i-OTA) ukuya ...
Isisombululo: Andikwazi ukuhlaziya i-iPad yam nge-OTA
por Iindaba ze-IPad yenzayo 10 iminyaka .
Abantu abaninzi bazama ukuhlaziya i-iPad yabo nge-OTA, besebenzisa uHlaziyo lweSoftware olufumaneka kuseto lwe-iPad, kodwa ...
Isifundo: I-jailbreak ifakwe kwi-iOS 5.1 kunye neRedsn0w ye-iPad 1 (iMac kunye neewindows)
Kule tutorial siza kuchaza indlela yokuqhekeza i-Tethered iOS 5.1 usebenzisa iRedsn0w 0.9.10b6. Iyahambelana kuphela ...
Isifundo: hlaziya i-iPhone yakho kwi-iOS 5.1 ngaphandle kokulayisha i-baseband (Windows kunye neMac)
Ngalesi sifundo uya kuba nakho ukuhlaziya i-iPhone yakho kwi-iOS 5.1 ngaphandle kokufaka i-baseband ukuze ukwazi ukusebenzisa iGevey SIM ...
Isifundo (Mac): Lungisa "iTunes Library.itl ayinakufundwa ..." impazamo